Kedu ihe bụ isi mba na-eduga na Ecommerce? | ECommerce ozi ọma
Kedu ihe bụ isi mba na-eduga na Ecommerce?
Oge a ka anyị chọrọ ịgwa gị gbasara isi mba na-eduga na Ecommerce ma ọ bụ azụmahịa kọmputa. Dịka anyị maara, ịzụ ahịa n'ịntanetị na-arịwanye elu n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na mba ụfọdụ dị iche karịa ndị ọzọ.
El Ọganihu Ecommerce na China apụtawo ìhè, na-adaba na nnukwu ahịa nke nnukwu ụlọ ahịa na-ere ahịa n'ịntanetị Alibaba. China nwere uto nke 35% kemgbe afọ 2013, nke bụ okpukpu abụọ nke isi mba niile na-eduga na Ecommerce, ewezuga Germany na Brazil. A na-eme atụmatụ na China ga-enwe uto nke e-commerce na ahịa n'oge 2018.
na Ahịa Ecommerce na United States Ha na-aga n'ihu na-abawanye, na-enye ohere ịkọ atụmatụ atụmatụ na ire ere mkpọsa mkpokọta nke 10% maka 2018. Mgbe China na United States, enwere nnukwu oghere na mba ndị ọzọ, nke gosipụtara ikike nke ikike abụọ ndị a. Site n'ụzọ, onye na-ere ahịa kachasị na US bụ Amazon.
N'agbanyeghị na ị nọ n'ọnọdụ nke atọ na ndepụta a, ndị UK na-ekwusi iche nke ihe karịrị ijeri dollar 200 jiri ya tụnyere United States. N'agbanyeghị nke a, UK nwere pasent kachasị elu nke ntanetị n'ịntanetị ma e jiri ya tụnyere ọnụahịa mkpọsa mkpọsa na 13%.
na Ahịa Ecommerce na Japan Ha bụ ndị nnukwu ụlọ ahịa na-ere ahịa n'ịntanetị Rakuten na-akwado ha, nke abụghị naanị otu n'ime nnukwu ụlọ ahịa na Japan, mana ụwa dum. Ihe na-adọrọ mmasị bụ na ha na-enye ọrụ na mpaghara ndị ọzọ dịka ọrụ ụlọ akụ, ebe nrụọrụ weebụ njem, ọrụ brokerage, wdg.
El e-azụmahịa na Germany nwetara pasent nke abụọ kachasị elu nke uto kemgbe 2013 ruo ugbu a, naanị China na Brazil karịrị ya. Germany bụkwa nke anọ kachasị elu na pasent nke ire ere ahịa, nke Amazon na-akwalite, nke bụ saịtị azụmahịa e-commerce kasị ukwuu na mba ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » StartUps na ndi oru itumgbere ahia » Kedu ihe bụ isi mba na-eduga na Ecommerce?
Ihe 3 kwesiri iburu n'uche mgbe imeputa ahia Ecommerce
Ecommerce na United States na-akwado uto ahụike